Xildhibaan sheegay in isku-shaandheynta Xukumadda Hirshabeelle lagu qancinayey Baarlamaanka – Kalfadhi
Xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan ayaa u sheegay Kalfadhi in isku-shaandheynta uu Madaxweynaha Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, ku sameeyey Golihiisa Wasiirada ay ahayd mid lagu qancinayey Xubnaha Baarlamaanka Hirshabeelle, oo uu sheegay iney ku kacsanaayeen Madaxweyne Waare.
Xildhibaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 35 Xildhibaan ay hadda ku jiraan Xukumadda Hirshabeelle, lagana yaabo in kuwa kale lagu sii kordhiyo. Arrintaas ayuu sheegay Xildhibaan Wabar iney dejisay Baarlamaanka Hirshabeelle, oo culeys siyaasadeed ku haayey Madaxweynaha.
“Xoogaa waxaa jiray buuq ahaa in wasiirada banaanka laga keenay, oo uu (baarlamanku) hal sano dul-qaadanayey” ayuu Xildhibaan Wabar ku yiri Kalfadhi. “Laakiin hadda, xoogaa hadda waxaad mooddaa inuu buuqii (baarlamaanka) degay, oo uu jawigu degan yahay” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Waxa uu sheegay in uu u arko in aysan arrintaas liddi ku ahayn shaqada Golaha Willaada Hirshabeelle, oo ay shaqadoodo ahayd iney Xukumadda la xisaabtamaan aysan meesha ka saari doonin Xildhibaannadaas 30% ka ah Baarlamaanka Hirshabeelle. “Lixdan Xildhibaan haddii ay banaanka taagan tahay, sodonka kale wax weyn oo saameyn ah oo ay sameyn karaan lama arko” ayuu yiri Wabar.
Xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan waxa uu sheegay in, inkasta oo ay arrinta isku-shaandheyn oo ay Xildhibaanno badan kaga mid noqdeen xukumadda, sida uu hadalka u dhigay, aysan ahayn rabitaanka Madaxweyne Waare, ay u rajeynayaan iney wax badan ka qaban doonaan xaaladaha qalifsan ee Hirshabeelle ka taagan.
“Hirshabeelle wax weyn oo hadda la kala boobayo maba yaalaan. Waa maamul iska bilow ah, oo qof walba meeshii loo dhiibo uu la daalaa dhacayo, oo uu qofku wax ka bilaabayo meel eber ah, lana rabo inuu hadda ka mira dhaliyo” ayuu yiri Xildhibaan Wabar.